Wasaaradda warfaafinta oo martigelisey xuska koowaad ee UNSOM – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho 03 June 2014 – Wasiirka Warfaafinta Mustaf Duxulow ayaa maanta xarunta Wasaaradda Warfaafinta ku martigeliyay xafladda sanadguurada 1aad ee UNSOM, una mahadceliyey Nicholas Kay, Ergeyga Gaarka ah ee Qaramada Midoobey ee Somalia oo si hagar-la’aan ah u taageera Dowladda Federaalka iyo Shacabka Soomaaliyeed, si dalka loo gaarsiiyo amni iyo kala danbeyn buuxda.
Ka soo qeybgalayaasha waxaa ka mid ahaa Xasan Sheekh Maxamud, Madaxweynaha Somalia, Ridwan Hirsi Maxamed, Ku Xigeenka Ra’iisul Wasaaraha iyo Nicholas Kay, Ergeyga Gaarka ah ee XG ee QM u qaabilsan Somalia ahna Madaxa UNSOM.
Wasiirka ayaa soo dhoweeyey ka soo qeybgalayaasha xafladda Sanadguurada 1aad ee UNSOM. Waxaa goobta lagu soo bandhigay sawirro ka tarjumaya horumarka dalka iyo filin la magac baxay “Wadajir baa nabad lagu helaa Somalia” oo muujinayey horumarka baaxadda leh ee laga gaaray sidii nabad iyo degennaansho ay dalka uga dhici laheyd.
Wasiirka Warfaafinta oo goobta ka hadlay ayaa yiri “Wasaaradda Warfaafinta aad iyo aad bey ugu faraxsantahay inay martigeliso xafladan muhiimka u ah Somalia. UNSOM waxey nala joogtay 12kii bilood ee la soo dhaafay, waxaana na farxad gelineyso isbedelka horumarka leh ee taageerada QM ee Somalia. Waxaan hadda heysanaa hoggaan si hagar la’aan ah u shaqeeya oo ay ka go’antahay inuu nagala shaqeeyo sidii loo mideyn lahaa taageerada caalamka ee Somalia. Mudane Kay waxuu ka howlgalay sidii aan u heli laheyn hal albaab ee laga soo galo hay’adaha QM, oo ah arrinkii uu Madaxweynaha Somalia codsaday markii la doortay September 2012. Nicholas Kay, horumar weyn buu ka sameeyey arrinkan oo uu xitaa dadaal dheer ah sameeyey oo uu beesha caalamka ku mideeyo sidii ay u taageeri lahaayeen Somalia.
“Sida aad ka aragtaan sawirada la soo bandhigay iyo filimka aad daawateen oo nawada tusaya sida aan horumarka ballaaran uga sameeynay dalka, waana inaan u dabaaldegno horumarkaas baaxadda leh ee aan sida wada jirka ah u wada sameyneyno si dalku u noqdo mid nabad ah oo horumar ku tallaabsado.
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka dowladda ayaa yiri “Waxaan maanta jira wada-shaqeyn xoogan oo nagala dhaxeysa UNSOM, oo 4tii bilood ee la soo dhaafay waxaan horumar ka sameyney arrimo badan oo ay ka mid yihiin inaan sameynay la tashiyo ballaaran eek u wajaran Sharicga Saxaafadda iyo Sharciga Isgaarsiinta oo aan la tashanay qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaan in ka badan 10 degmo ka xorreynay kooxaha Argagaxisada, waxaan wadnaa xasilnta dalka oo aan shacabka la kaashano, waxaan sameyney Guddiga Madaxa Bannaan ee Dib u Eegista Dastuurka oo 5 qof oo sumcad ku dhex leh dalka aan u xulnay oo matala shacabka Soomaaliyeed si ay u hoggamiyaan dib u eegista Dastuurka, Waxaan sameynay guddi-hoosaadyo heer wasiiro si aan u sameyno maamul wanaag, Waxaan diyaarinay Istraatejiyada Warbaahinta oo naga saacideysa inaan haggaajino xiriirkeena iyo fariimaheenna, Waxaan sameynay Xarunta Wadajirka ee Amniga oo aan xiriir wanaagsan leenahay AMISOM, Madaxda Qaranku waxey tageen gobolada dalka oo ay dadka deegaanka ugu baaqeen dib u heshiisiin iyo maamul wanaag, Maamulka iyo Maareynta Maaliyadda oo horumar weyn laga gaaray, waxaan maanta heysanaa Guddi maamula, Guddoomiye iyo Ku xigeen oo uu leeyahay Bankiga Dhexe oo ku yimid si tartan furan oo loo siman yahay oo ay nagala shaqeysay Bankiga Adduunka, Sidoo kale waxaan heysannaa Hanti Dhowr Guud iyo Xisaabiye Guud oo iyagana ku ymid nidaamka tartanka furan ee loo wada siman yahay. Arrimahan oo dhan waxaan ku guleysannay iyadoo ay jiraan caqabado fara badan.”
Wasiirka ayaa hadalkiisa ku soo gabogabeeyey oo yiri “Shaki iigama jiro in UNSOM ay sii wadeyso la shaqeynta Dowladda Federaalka sidii ay arrimaha muhiimka u ah uga shaqeyn laheyd sida Dib u eegista Dastuurka, dhaqangelinta Federaalka iyo hirgelinta nidaamka Dimoqraadiyadda ah si dalka loo gaarsiiyo doorashooyin xor ah oo ka dhaca 2016ka. UNSOM maanta waxey joogtaa xaalad ay ku fahamtay mudnaanta dalka iyo caqabadaha jira, oo ay ka mid yihiin bulsho kala firirsan, soo celinta amniga iyo nabadeynta iyadoo dhanna aan kula dagaaleyno argagaxisada, dhaqaale la’aan, iyo caqabadaha kale ee jira. Sanad ka hor Nicholas Kay macluumaad fara badan kama uusan heysan Somalia, laakin hadda waxuu fahamsanyahay caqabadaha faraha badan ee jira ee dowladdu maalin walba la kulanto. Habka ugu fiican oo looga bixi karo mushkiladaha ayaa ah in si buuxda loo taageero Dowladda Federaalka oo ah hay’adda kaliya oo Soomaalidu ay ku dhan tahay oo matasha dhammaan shacabka oo dhan. Waxaana muhiim ah in dhammaan taageerada Somalia loo soo marsiiyo Dowladda Federaalka oo ah hay’adda sharciyadda u heysata Somalia oo matali karta midnimada iyo Xaduudaha Somalia. Waxaan rajeynayaa in sanadka danbe sanadguurada 2aad aan ku dabaaldegno horumarro waaweyn oo aan sameynay, waxaana idiin rajenayaa guul. Mahadsanidiin.”
Xus loo sameeyey sakartii lagu dilay weerarkii baarlamanka Soomaaliya